रामदेवको टेलिभिजन : दर्शन होइन, व्यापारका लागि « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
रामदेवको टेलिभिजन : दर्शन होइन, व्यापारका लागि
नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा हुने वैदेशिक लगानी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नीति पनि प्रष्ट छैन । नेपाल सरकारले आमसञ्चार नीतिलाई महत्व दिएर कार्यान्वयन गरेको पनि देखिँदैन । यस्तो बेला योगगुरु रामदेवले नेपालमा ‘पतञ्जलि नेपाल र आस्था नेपाल टेलिभिजन खोलेका छन् ।
‘योगा गरौं, निरोगी रहौं’ भन्ने रामदेवका धेरै चेलाचपेटाहरु ब्लड प्रेसर र सुगर अनि क्यान्सरका कारण समयमै अस्पतालको उपचार नपाएर अकालमै मृत्युवरण गरेको धेरै देखेका छौं । रामदेवको योगाले रोग निको पार्ने होइन, बल्झाउने गर्छ भन्दा केही मान्छेलाई चित्त नबुझ्ला । किनभने रामदेवलाई भजाएर यिनले पेट पूजा गरिरहेका छन् । र, यस्ता मान्छेहरुले रामदेवलाई ‘ब्रान्ड’ बनाएका छन् ।
‘योगाको नाममा रामदेवले औषधि बेचेको देख्दा पनि धार्मिक तथा आयुर्वेदिक भन्दै पत्याउने हुस्सुहरू भेटिन्जेलसम्म रामदेवको ‘धार्मिक व्यापार’को दबदबा रहिरहनेछ । यो एउटा उसको व्यापारको शैली हो । पतञ्जलीले आयुर्वेदको प्रचार, व्यापारसँगै राजनीति गर्ने गरेको आरोप छ । पतञ्जलि भारतीय जनता पार्टीनिकट रहेको समेत दाबी गरिएको छ ।
अहिले संसारमै टेलिभिजनलाई सञ्चारको सशक्त माध्यमको रूपमा चिनिन्छ । यसैको उपयोग गर्दै रामदेवले ‘योग साम्राज्य खडा गरेका छन्् । शुरुमा भारतमा फैलिएको ‘योगा’ ले भारतमा कांग्रेस आईलाई सफाया गर्न सहयोग गर्र्थे । दर्शनबाट धर्म, व्यापार हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकाले यसले भारतमा बेलाबेलामा विवाद खडा हुँदै आएको छ ।
यतिखेर, रामदेवलाई टेलिभिजन खोल्ने अनुमति दिनेहरू मख्ख परेका होलान् । तिनले के भुलेका छन् भने गाई मारेर गधा पोस्ने काम कहिल्यै पनि निको हुँदैन । नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथि ठाडो आक्रमण गर्नका लागि यो टेलिभिजनले सशक्त भूमिका अवश्य खेल्नेछ ।
हुन त भारतीय सिरियल र व्यापारी तथा राजनितिहरूका कारण नेपालको सांस्कृतिक तथा भाषिक आक्रमण वा अतिक्रमण भएको भनेर बेला बेलामा कराउने नेपालीहरू रामदेवको टेलिभिजनले केही नाप्दैन भनेर चुप लागेर बसेका हुन पनि सक्छन् । कि त उनीहरूले रामदेवको प्रवचनले र योगले मन्त्रमुग्ध भइरहेका छन्, बुझ्न समय पर्खिनुपर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा रामदेवको अवैधानिक टेलिभिजनको उद्घाटन
अर्को अचम्म त के भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रामदेवको टेलिभिजनको उद्घाटन गरेको भनिए पनि ‘छायाँ उद्घाटन’ झैं गरेका छन् । प्रमुख अतिथिको चर्चा हुनुपर्नेमा ‘रामदेव महाराज’ ले चर्चा बटुलेपछि यो स्वाभाविक पनि हो । त्यसैले, प्रधानमन्त्री देउवाले मर्यादा राख्न सकेको भन्न सक्ने अवस्था भएन ।
भारतले नाकाबन्दी गर्दा, तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई मार्दा, देशको सीमा मिच्दा ‘चुँ’ नबोल्ने, अहिले भारतीय जोगीलाई ‘बाबा, गुरु, स्वामी’ भन्दै लम्पसार पर्ने यी कस्ता नेता हुन् । प्रतिपक्षमा बस्नेहरूले समेत विवाद गरेको पाइँदैन ।
देशमा आफ्नै आमालाई रुवाएर सशस्त्र विद्रोह गर्ने द्वन्द्ववादी नेताहरु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधिलगायतको उपस्थितिले यहाँ कस्तो खालको द्वन्द्व देखाउँछ त खोई ?
नेपालीलाई उद्योग खोल्न नदिने, भएका उद्योग बन्द गराउने, आफ्नो देशमा उत्पादन भएका वस्तुलाई कर लगाउने, प्रहरी लगाएर तरकारी, बिउबिजन खाल्डोमा हाल्ने, पढेकालाई विदेश पठाउने, उद्योगधन्दामा राजनीति खेल्ने, अनि आफ्नो हैसियत बिर्सिएर नुनदेखि सुनसम्म भारतबाट ल्याएपछि भारतले आफ्नो अभिमान देखाउँदैन त ? हेर्दै जानुस् एकदिन फेरि नाकाबन्दी लगाउँछ ।
रामदेवका लगानी रहेको प्रतिबन्धित सञ्चारमाध्यमको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्रीको के छ स्वार्थ ?
कानुनले विदेशी लगानी प्रतिबन्ध गरेको अवस्थामा भारतीय योगगुरू रामदेव र पतञ्जलि योगपीठका अध्यक्ष आचार्य बालकृष्णले नेपालमा दुई टेलिभिजन च्यानल सञ्चालनमा ल्याए । मण्डिखाटारस्थित पतञ्जलि योगपीठको आश्रममा यी दुई टेलिभिजन च्यानल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीहरू र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पुगेर रामदेवलाई अभिवादन गरे ।
सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता नगरिएका यी दुई टेलिभिजन च्यानल उद्घाटनमा भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैं पुगेका छन् । बिनादर्ता कुनै पनि सञ्चारमाध्यम प्रकाशन प्रसारणमा ल्याउन नपाइने कानुनी व्यवस्था भएको नेपालमा अझ प्रतिबन्धित नेपालको कानुनविपरित वैदेशिक लगानी त्यसमाथि पनि देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति यस्ता अवैधानिक कम्पनीको उद्घाटनमा जानु आफैंमा लज्जास्पद कुरा हो यसमा प्रधानमन्त्री आफैँलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।
यी दुवै टेलिभिजन रामदेवको लगानी गरेको भारत हरिद्वारको पतञ्जली आयुर्वेदले नेपालमा सञ्चालनमा ल्याएको हो । आचार्य बालकृष्ण पतञ्जलिका अध्यक्षसमेत हुन् । ‘आस्था’ नामको धार्मिक कार्यक्रम चलाउने च्यानल भारतमा पनि छ । यसैगरी, भारतमै रहेको पतञ्जली टिभीले योग तथा आयुर्वेदबारे कार्यक्रम चलाउने गरेको छ ।
आमसञ्चार माध्यममा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सरकारले बनाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको पालामा यो कानुन आएको थियो। नयाँ कानुन ल्याउँदा सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ खारेज गरेको थियो ।
आमसञ्चार नीति २०७३ मा यो सम्बन्धी व्यवस्था भने छ । त्यसमा ‘नेपाली जनताको विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हितमा असर नपुर्‍याउने गरी पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने अवस्थामा’ विदेशी लगानीको भनेको छ । नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय हितमा असर नपुर्‍याउने गरी पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रकाशन र प्रसारण माध्यममा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि विशेष सर्तहरू तोकी त्यस्तो सञ्चारमाध्यममा पत्रकार, कामदार र कर्मचारी नेपाली नागरिक मात्र रहने व्यवस्था गरिने छ । विदेशी लगानीर्र्ताको भूमिका निर्णयक हुने गरी लगानी प्रोत्साहन गरिएको छैन ।’
तर, यता सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले यी दुई टेलिभिजन च्याल विभागमा दर्तै नभएको बताएका छन् । ‘यी च्यानल कानुनसम्मत रूपमा दर्र्त हुन आउनुपर्ने हाम्रै विभागमा हो, अहिलेसम्म आएको देखिँदैन, दर्र्ता हुन नआएकाले उनीहरूको के–कस्तो लगानी, कार्यक्रम के चलाउने हो भन्नेबारे जानकारी नभएको उनले भनेका छन् ।
२०७३ मा आएको नीतिले सञ्चारको पूर्वाधार क्षेत्रमा विदेशीले लगानी गरे पनि त्यसको सञ्चालनमा नेपाली लगानीकर्र्ताको नियन्त्रण हुनुपर्ने नीति लिएको थियो । तर, २०७५ मा ऐन आउँदा सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रूपमा निषेधित गरियो । ऐनले नै सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध गरेपछि नीतिमा के लेखिएको छ भन्ने कुराको अर्थ नभएको हमालले बताएका छन् ।
उता भारतमा यसै विषयलाई सञ्चार रामदेवको दुवै च्यानलको उद्घाटन नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट भएको खबर भारतीय सञ्चारमाध्यमले महत्वका साथ प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । केही मिडियाहरूले त अझ यी दुई च्यानलमा १० हजार करोड भारतीय रूपैयाँ लगानी रहेको खुलासा गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक कुरा खोतल्न पाएपछि भारतीयहरू यसै नै खुसी हुने भए । तर, नेपालीका लागि यी दुई च्यानल कागलाई बेल पाकेसरह हुनेछ ।
नेपालमा यसले कस्तो असर पार्ला
कानुनले प्रतिबन्ध गरेको क्षेत्रमा रामदेवले लगानी गर्दै दुई वटा टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याउने बताएपछि यसले नेपाली क्षेत्रमा तरंग नल्याउने प्रश्न नउठ्ने कुरै भएन । यसले रामदेवको ‘आस्था’ र पतञ्जलि च्यानलले अहिले तत्कालका लागि नेपाली सञ्चारमाध्यम ओझेलमा परेको छ ।
यसले भविष्यमा नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई उठ्नै नसक्ने गरी पत्तासाफ गरी भारतीय टिभी, रेडियो अनलाइको हालीमुहाली हुन बेर छैन । यसले नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई ठूलै नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले, सरकारले नै यसरी विदेशी च्यानललाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने नेपाली सञ्चार माध्यम, नेपाली भाषा, नेपालीपन हराउने निश्चित छ । यसतर्फ सरकारको बेलैमा ध्यान जाओस् ।
प्रकाशित मिति : ५ मंसिर २०७८, आइतबार ३ : ०० बजे